San Fermín de los Navarros na chọọchị ya | Bezzia
San Fermin nke Navarrese
Susana godoy | 17/06/2022 12:00 | njem
Mgbe anyị na-ekwu maka San Fermín de los Navarros, mgbe ahụ, anyị ga-ekwu banyere Ụka. N'ihi na ọ bụ otu n'ime ụlọ arụsị nke ekwuputala 'Asset of Cultural Interest', laa azụ na 90s. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị nwetabeghị ohere ileba anya na ya, ọ bụ oge ịhapụ onwe gị ka ebupụ ya. site na ya.
Ọ bụ ya mere anyị ji bịa gwa gị otú ị ga-esi ruo ya na ihe niile ị chọrọ ịma gbasara chọọchị dị ka San Fermín de los Navarros. n'ihi na mgbe ụfọdụ anyị nwere ebe dị ịtụnanya nso karịa ka anyị nwere ike iche n'echiche. O yiri ka ebe a bụ otu n'ime ha na n'ezie, ị ga-ahụ ya n'anya mgbe i nwere ya n'ihu gị.
1 Ebee ka ụlọ ụka ahụ dị
2 Otu esi enweta San Fermín de los Navarros
3 akụkọ ihe mere eme nke ụka
Ebee ka ụlọ ụka ahụ dị
A ghaghị ikwu na chọọchị San Fermín de los Navarro dị na Chamberí. Nke a bụ otu n'ime mpaghara Madrid nke ahaziri na mkpokọta 6 mpaghara ma ị ga-ahụ ha na etiti etiti. Ọ bụ otu n'ime ebe enwere ike ịsị na e nwere nchikota ụkpụrụ ụlọ karịa nke ukwuu. N'ihi na n'ime ya ị ga-ahụ otú e si enwe ụlọ modernist kamakwa neo-Gothic yana neo-Mudejar. Nchikota nke ị ga-enwe ike ịchọta nzọụkwụ site na nzọụkwụ n'etiti ụlọ kamakwa n'etiti ụlọ ndị kachasị mkpa nke ebe ahụ. N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya na a kpọsara ọtụtụ n'ime ha dị ka ihe ncheta mba. Otu n'ime ha bụ ụka nke taa kpakpando na mbara igwe anyị kamakwa ọtụtụ ụlọ akwụkwọ, mgbapu na convents.
Otu esi enweta San Fermín de los Navarros
Ozugbo ịnọ n'ọdụ ụgbọ elu yana na T4, ị ga-eji ụgbọ ala rute ihe dịka nkeji iri itoolu. N'ezie, ọ bụrụ na ị nọ n'akụkụ ogige ntụrụndụ, ị nwere naanị ihe dị ka nkeji 46 n'ihu gị. Ọ bụ ya mere ụgbọ ala ndị na-aga ebe a bụ 147, 150, 16 na 7. Ọ bụ ezie na ọ bara uru ịlele mgbe niile, ma ọ bụrụ na enwere mgbanwe ọ bụla na njem njem.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ụgbọ oloko gaa. yabụ site n'ọdụ ụgbọ elu Madrid gaa n'ụka enwere ihe dị ka nkeji iri anọ na asatọ. Site na mpaghara Alcampo ọ karịrị nkeji iri ise na isii. Ụgbọ oloko C56 na C10 bụ ndị ga-ebuga gị ebe ị na-aga. N'ezie, dị ka anyị kwurula, mgbe ụfọdụ enwere ike inwekwu ọrụ ma ọ bụ na ọ ga-ebelata ma ọ dị mfe ịlele usoro ihe omume ka ị ghara ịnọ n'ala. Ebe kacha nso ebe anyị na-aga bụ Rubén Darío, Almagro, Colón, Castellana ma ọ bụ Gregorio Marañón. Ebe ọ bụ na site na ha gaa n'ụka, a na-eji naanị ihe dị ka nkeji atọ aga ije.
akụkọ ihe mere eme nke ụka
A na-ekwu na e hiwere ya n'ihi otu ndị Navarrese bụ́ ndị bi na Madrid na ndị nwere mmasị siri ike na San Fermín. N'ihi ya, ọ bụla July 7 ha na-ezukọ mgbe niile, n'ihi ya, ha na-ekpebi ịmepụta ebe a kapịrị ọnụ mgbe ha gachara ọtụtụ oge. Ebe ọ bụ na na 1684 bụ mgbe ha na-emepụta ọgbakọ ma ọ gaghị abụ ruo 1746 mgbe e wuru ụlọ ụka mbụ nke Navarros mgbe ha nwetara ebe obibi nke Monterrey. N'ezie, oge ụfọdụ ka e mesịrị, a kwaturu ya. Oge ụfọdụ ka e mesịrị, n’afọ 1886, e wuru chọọchị anyị maara taa.. Nke a na chọọchị ogide na Central akụkụ na n'akụkụ nke ọ bụla, e nwere ubi ebe. N'ime ha nwere ike ịhụ pavilions n'akụkụ.
Maka mpaghara dị n'èzí, ị nwere ike ịhụ otú brik si bụrụ onye na-akwado ya, nke na-eduga anyị na-ekwu maka ọnụ ala ya dị ala kamakwa ọ na-ewu ngwa ngwa. Ma n'ime ụdị gothic ga-adị ugbu a, nke nwere agba atọ na oghere kpakpando. Emere ebe ịchụàjà nke May na narị afọ nke XNUMX na iko dị na windo na-anọchite anya uwe agha nke Navarra. Ya mere, maka ihe a niile na ihe ndị ọzọ, ọ bụ oge ịkwụsị n'ebe dị otú a. Ị naghị eche?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » njem » San Fermin nke Navarrese
Ibe ọkụ egosipụtara na-agbakwunye agwa na kichin gị
Nchikota nke olu H&M nke ị na-agaghị echefu